Ruling party assured Mugabe he wouldn't face prosecution - Marketers Log
A street vendor eats lunch outside a local market in Harare, Zimbabwe, Thursday, Nov. 23, 2017. Zimbabweans prepare for their new president in waiting, Emmerson Mnangagwa's swearing in on Friday after 37-years of rule by Robert Mugabe. (AP Photo/Bram Janssen)
A Zimbabwean military band parades during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe, Thursday, Nov. 23, 2017. Zimbabwe on Thursday was making preparations to swear in a new leader after 37-years of rule by Robert Mugabe. (AP Photo/Ben Curtis)
Zimbabwean military parade during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe, Thursday, Nov. 23, 2017. Zimbabwe on Thursday was making preparations to swear in a new leader after 37-years or Robert Mugabe rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Zimbabwean military leave after a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe, Thursday, Nov. 23, 2017. Zimbabwe on Thursday was making preparations to swear in a new leader after 37-years of Robert Mugabe rule. (AP Photo/Ben Curtis)
A man reads a local newspaper in Harare, the day after Zimbabwe's President in waiting Emmerson Mnangagwa, emerged from hiding and returned home, Thursday, Nov. 23, 2017. Mnangagwa will be sworn in on Friday after 37-years of rule by Robert Mugabe. (AP Photo/Bram Janssen)
Zimbabwean military parade during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe, Thursday, Nov. 23, 2017. Zimbabwe on Thursday was making preparations to swear in a new leader after 37-years of rule by Robert Mugabe. (AP Photo/Ben Curtis)
Workers erect stands ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe Thursday, Nov. 23, 2017. Zimbabwe on Thursday was making preparations to swear in a new leader after 37 years. (AP Photo/Ben Curtis)